FIVORIANA Package Boeing B-52H FSX & P3D - Freeware
Izany no iray FSX/P3D ny fiovam-po fotsiny ary tsy hiasa miaraka amin'ny FS2004. Model voalohany namboarin'ny AlphaSim Ltd ho an'ny FS2004. Nohavaozina tamin'ny andian-tsoratra CONECT B-52H nataon'i David Robles.
Ity fiaramanidina ity dia nosedraina FSX Gold miaraka amin'ny Acceleration, Prepar3Dv2.5, ary Prepar3Dv3. Tsy mifanaraka P3D v4 +
The CONECT Sehatra tena vaovao izany no tsy tena Tantara, niditra fanompoana amin'ny faramparan'ny 2014, tany am-boalohany 2015 ary mbola nohavaozina:
B-52s dia tsindraindray USAF nohavaozina ao amin'ny fitobian'ny fikojakojana toy ny Air Force Tinker Base, Oklahoma. Ny Buff no tokony hijanona eo amin'ny fanompoana, fara fahakeliny, mandra-2045, efa ho 90 taona taorian'ny voalohany niditra B-52 fanompoana. Ny USAF Mbola miantehitra amin'ny B-52 satria mbola mahomby sy ara-toekarena baomba mavesatra, indrindra eo amin'ny karazana asa fitoriana izay efa natao hatramin'ny faran'ny Ady Mangatsiaka hamely ny firenena izay voafetra rivotra fiarovana fahaiza-manao. Ny B-52 manana ny fahafahana malaina ny fotoana maharitra ny (na tsara ivelany) ny ady, ka vonjeo fametrahana mazava tsara sy mivantana fifanandrinana afo munitions. Efa ho sarobidy amin'ny fanohanana ny asa tany vao haingana nandritra ny ady rehetra. Boeing amin'izao fotoana izao valo nanolotra fitaovana in 2013. Fiaramanidina voalohany amin'izao fotoana miatrika ny fampiakarana lenta ny dingana, mba ho vita amin'ny Aprily 2014. 10 fanampiny fitaovana ho delievered any 2014 sy 2015.
Tamin'ny volana Jolay 2013, ny Air Force nanomboka ny sambo-sakany teknolojia fanavaozana ny ny B-52 baomba antsoina hoe Combat Technology Network Communications (CONECT) mba manavao elektronika, fifandraisana teknolojia, computing, instrumentation, avionics amin'ny tokotanin-tsambo ny sidina. CONECT upgrades ahitana rindrambaiko sy ny fitaovana vaovao toy ny lohamilina, modems, radio, angona-rohy, mpandray, Hafanàm-po an flightdeck sy workstations ho an'ny tantsambo.
Iray silaka dia ny Arc-210 Mpiady an-dafin'i-MANAN-TANTARA-ny-imasony rindrankajy programmable fampielezam-peo afaka mamindra feo, tahirin-kevitra, ary ny vaovao in-nandositra eo amin'ny B-52s sy ny tany didy sy ny fanaraha-maso toerana, mamela ny fifindran'ny sy ny fandraisana ny tahirin-kevitra miaraka amin'ny fanavaozana ny faharanitan-tsaina, sarintany, na lasibatra vaovao; aloha in-sidina kendrena fiovana takiana maka tahaka an Flag, raha ny Arc-210 mamela ny milina-to-milina fampitana ny tahirin-kevitra, mahasoa amin'ny ela-fiaretana asa fitoriana izay mety ho lasibatra niova toerana rehefa ny B-52 dia lavitra. Ny fiaramanidina dia ho afaka ny hahazo vaovao amin'ny alalan'ny Link-16. CONECT upgrades hitentina $ lavitrisa 1.1 ankapobeny ka ento taona maro. Famatsiam-bola no antoka ho an'ny 30 B-52s sy ny Air Force Manantena for 10 CONECT upgrades isan-taona, fa ny tahan'ny izay mbola tsy tapa-kevitra. Fitaovam-piadiana upgrades ahitana ny 1760 Fitaovam-piadiana anatiny Bay Upgrade (IWBU), izay manome ny 66 fitomboana isan-jato amin'ny kalesy fahaizany mampiasa interface tsara ny nomerika sy ny milina mpandefa mba hampitombo ny fitaovam-piadiana payload. Ny ezaka IWBU Andrasana ny vidin'izany mitovitovy $ 313 tapitrisa. Ny 1760 IWBU dia mamela ny B-52 mba hitondra ny AGM-158B JASSM-Era sy ny ADM-160C MALD. 1760 IWBUs rehetra tokony ho an-tserasera amin'ny alalan'ny Oktobra 2017.
Araka ny manohitra ny telo B-52s nitondra 36 fitaovam-piadiana, roa baomba dia hanana ny fahafahana hitondra 40 fitaovam-piadiana, fampidinana ny isan'ny Crews sy ny be-tsolika ilaina ho an'ny asa fitoriana, ary manome ny safidy ny fametrahana bebe kokoa fitaovam-piadiana amin'ny tanjona mitovy isa ny fiaramanidina.  ny 1760 IWBU mamela ny fametrahana mazava tsara-nitondra fitaovam-piadiana mba ho napetraka avy ao ny fitaovam-piadiana helo-drano, fampitomboana ny isan'ny nitarika fitaovam-piadiana ny B-52 afaka hitondra sy fampihenana ny filana ny nitarika baomba mba ho entina ety ivelany amin'ny elatra hardpoints. Ny dingana voalohany dia mamela ny B-52 hitondra 24 500-kilao JDAMs na 20 2,000-farantsanao JDAMs, amin'ny endriny samy hafa isehoan'ny tatỳ aoriana accommodating ny JASSM sy MALD fianakaviana ny balafomanga. Ankoatra ny nitondra baomba marani-tsaina kokoa, mifindra azy anatiny avy amin'ny elatra vokatra ao amin'ny 15 isan-jato tahiry solika sy ny lehibe isan-karazany avy amin'ny tsy tarihiny. Ny USAF Mbola miantehitra amin'ny B-52 satria mbola mahomby sy ara-toekarena baomba mavesatra, indrindra eo amin'ny karazana asa fitoriana izay efa natao hatramin'ny faran'ny Ady Mangatsiaka hamely ny firenena izay voafetra rivotra fiarovana fahaiza-manao. Ny B-52 ihany koa eo amin'ny fanompoana, satria mbola nisy tsy azo antoka fanoloana.
Firafitry, ny airframes mbola matanjaka, fa eo amin'ny lafiny elektronika fahaiza-manao, ny baomba dia vato vakoka taona. Fanatsarana hafa dia ahitana ny fanjakana-avy-ny-kanto computing tambajotra amin'ny workstations isaky ny toerana sy ny mpiasa Integrated interphone nomerika amin'ny fitomboan'ny fahafahana izay hamela tantsambo mpikambana mba mifampiresaka amin'ny headsets fitaovana amin'ny tabataba-ny fanafoanana ny teknolojia. Ny $ 76 tapitrisa CONECT fanavaozana dia ho tanterahina amin'ny alalan'ny Boeing ary manarona ambany-tahan'ny famokarana voalohany ny fitaovana CONECT voalohany, miaraka amin'ny piesy sy ny fikojakojana sy ny asa fanompoana amin'ny Tinker.
Jereo manaraka izao Link:
New mampiavaka amin'ity entana:
1. Loko vaovao rehetra.
2. New fotsy midona amin-saritany
3. Loko rehetra ao DDS endrika.
5. New rivotra fanahafana rakitra.
7. FSX Napetraka ny Air File.
8. Camera hevitra koa.
9. Transparency olana amin'ny VC modely niresaka.
10. Ny fitambaranà dizitaly vaovao noforonina.
11. FSX famaritana sy fametahana takelaka
12. Toerana misy anao sy ny fanao GPS
13. Miasa Traffic Radar
Downloads 17 675
Modely amin'ny AlphaSim, vaovao farany avy David Robles